internet connecting on mobile
ခတ်နဲ့ အညီ ရင်ဘောင်တန်းပြီး တိုးတက်နေတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ဖုန်းတွေနဲ့ အင်တာနက်သုံးလို့ ရနေပြီဆိုတော့ အင်တာနက် Setting လုပ်တတ်ဖိ...
အင်တာနက်အသုံးပြုရာတွင် 20% ပိုမြန်စေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်း
1. Start Menu—>> Click Run ကိုရွေးပါ။ 2. Type gpedit.msc ရိုက်ပါ။ 3. Enter ခေါက်ပါ။ 4. ဘယ်ဘက်ခြမ်းက Computer Configura tion ကို ...
Cmos Battery မဖြုတ်ဘဲ password ကျော်မယ်
1.cmd ကိုခေါ်လိုက်ပါ။ 2.အောက်ပါကွန်မန်းကိုရိုက်ပါ။ debugလို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင်တော့ အောက်ကပာာလေးတွေကို ဆက်ရိုက်လိုက်ပါ။070 10071...
ဖုန်းပိုက်ဆံကဒ် code လိုချင်ရင်
သေချာကြည့်ပါ ... Software ကတော့ Password Generator ပါ.. ဒါက အမှန်တော့ Generator လေးတစ်ခုပါ.. ဒါပေမယ့် ဗျာ.သုံးတတ်ရင်တော့ေ၇ွှပေ့ါ.. ကျွန်ေ...
2GB Memory stick to 4GB stick
အရင်ဆုံးမိမိပြုလုပ်လိုတဲ့ Stick ထဲမှာ မည်သည့် Data Files မျှရှိမနေရပါဘူး။ သေချာပြီဆိုရင် မိမိတိုးလိုတဲ့ Memory Stick ကို ကွန်ပျူတာမယ်တပ်လ...
အလွယ်ကူဆုံး ဗိုင်းရပ်စ်ရှာနည်း သတ်နည်း
virus file များရှာရန် command တစ်ကြောင်းသာအဓိကလိုအပ်ပါတယ် ။အထူးသဖြင့် Made in Myanmar virus တွေပေါ့။ taskmanager , folder options , regist...
ခု ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းများ အတွက် wifi ကိုမှ အလကား သုံးချင်တယ် ဆိုသူများ အဆင်ပြေအောင် ဆော့ဝဲ လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သုံးရတာ လွယ်မ...
ကဲ..ခု ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ...သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို ပေါ့ပါးအောင် လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ ထဲက နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုြေ...
Hacking By Stick (USB Thief)
Stick တစ်ချောင်းနဲ့ Hack ခြင်း Hacking စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် လက်ဆောင် တစ်ခုပေးချင်တယ်။ သိပြီးသားလူတွေလည်း ပါပါ လိမ့်မယ်။ အားစိုက်ထုတ်စရာ မလ...
Laptop အမျိုးအစားတွေကတော့များကြီးပါပဲ.....ဒီကြားထဲမှာမှသူ့အမျိုးအစားနဲ့သူ qualityကွာသွားတာတွေရှိ ပါတယ်.......ဘာအမျိူးအစားတွေလဲဆိုတာတော့အောက...
နည်းပညာ အထွေထွေ ဆော့ဖ်ဝဲ စာအုပ်များ ဗဟုသုတ Hacking convertor data recovery ဗိုင်းရပ်စ် သတ်ချင်ရင် AVG key for 2012 Clean your PC with one click Desktop က Icon မျှားတွေဖြုတ်မယ်. Disable /Enable Task Manager EA games key generator Ebook အစုံရမယ်နော်... Hidding Drive without any software Laptop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် Monitor ၀ယ်မယ်ဆို Networking အကြောင်း နဲနဲပါးပါး PowerISO 5.4 Server 2003 Ebook USB Repair software Universal Documents Converter Window7loader bootable command promp ပိတ်နည်း ၊ ဖွင့်နည်းလေးပါ dvd\_cd drive မပေါ်ရင် internet connecting on mobile internet connection testing key and crack lan ထဲမှာ ချက် ချင်ရင် slideshow video Edit virus wifi stealer window 8 Activator window registry wireless ကွန်ပျူတာကို ပုံမှန်လုပ်ပေးသင့်သည့်အချက်များ ကွန်ပျူတာလေး ပေါ့ပါးအောင် မကြည့်စေခြင်တဲ့ website တွေကို ဘလော့လုပ်နည်း သင်သည်...လူလော..ဘီလူးလော...နတ်လော....?
Newfolder.exe ဗိုင်းရပ်စ် သတ်မယ်
ကဲ..ကြုံဘူးတဲ့ သူတွေရှိသလို မကြုံဘူးတဲ့ သူတွေလဲရှိမှာပါ...ပြောချင်တာကတော့ newfolder.exe ဖိုဒါ တွေပါ ပြောရရင်တော့ ဗိုင်းရပ်စ် ပါဘဲ..ခု ကြုံနေရတဲ့ သူတွေ အတွက် ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုဘဲ ဒီ ဆော့ဝဲလေးကို ဘဲ run လိုက်ပါ အဆင်ပြေမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...
Labels: နည်းပညာ, အထွေထွေ, ဆော့ဖ်ဝဲ
Downlond link ကို Image ဖြင့် ညွှန်းနည်း
က်ိုစောနောင်ဝင်း ရေ ကျွန်တော် လုပ်တဲ့ အတိုင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်က ကုတ်လေးမှာ your download link နေရာမှာ အကို့ လခ်င့် လေးကို အစားထိုးပေးလိုက်ပါ ပုံကတော့ gif ဖိုင် ပုံလေး နဲ့ နမူနာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဲ့ပုံ နေရာ မှာ အကို ကြိုက်တဲ့ ပုံ ရဲ့ လင့်ခ် လေး ထဲ့ပေးလို့ရပါတယ် .. Image link ဆိုတဲ့ နေရာ လေးမှာ အောက်က လင့်ခ်လေးကို အစားထိုးကြည့်ကြည့်ပါ
<a href="your download link"><img border="0" height=" nnn " src=" http://api.ning.com/files/HXLvFMxAKuzho97pSudyupBW1jitjuR9*-eNyKNtcjkWxBDcoBLksjcQbSiFt3uUB2OcP1SeB86WRUfyUa0XS6Hu3QHfy986/gold_download.giff" width=" nnn " /></a>
အဆင်မပြေခဲ့ရင် ပြောခဲ့ပါ..ခုလို လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
Labels: နည်းပညာ, အထွေထွေ
အရင်ဆုံးမိမိပြုလုပ်လိုတဲ့ Stick ထဲမှာ မည်သည့် Data Files မျှရှိမနေရပါဘူး။ သေချာပြီဆိုရင် မိမိတိုးလိုတဲ့ Memory Stick ကို ကွန်ပျူတာမယ်တပ်လိုက်ပါ။ My Computer ထဲကို ၀င်ပြီး မိမိရဲ့ Stick ကိုမှတ်ရလွယ်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်ပါ ဥပမာ ကျွန်တော် Stick နာမည်က My Computer ထဲမှာ manlaythar(G:) ဆိုပြီးပေါ်နေပါမယ်။
Universal Key Generator ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Software နံမည်ကိုသာ ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ အပေါ်မှာ ရွေးလိုက်ပါ ... တော်တော်များများ Key တွေကို Generate လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Generator လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျ ... အသုံးဝင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ...
Windows7တင်ထားသော ကွန်ပျူတာကို Access Point ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
windows7တင်ထားသော ကွန်ပျူတာမှ wireless Adapter တော့ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး windows7တင်ထားသောကွန်ပျူတာမှာ cmd ကို Run as Administrator နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Command လိုင်းမှာ
netsh wlan set hostednetwork mode=allow "ssid=<sawgyi>" “key=<sawgyi123!@#>” keyUsage=persistent
ssid နေရာမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ssid Name နဲ့ Key နေရာမှာ ကြိုက်တဲ့ password ကို ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ Key က WPA Personal ကိုပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီရင် netsh wlan start/stop hostednetwork လို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Network Connection ဆိုတဲ့နေရာမှာ Microsoft Virtual wifi miniport Adapter လေးတစ်ခု ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်လို့ရဲ့ windows7run ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာလေးက Access Point ဖြစ်သွားပါပြီး။ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ။
Gtalk မှာ ၀င်ခဲ့တဲ့ နာမည်တွေမပေါ်အောင်
ကျွန်တော်အခုပြောပြမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ အင်တာနက် ဆိုင်မှာသုံးတဲ့သူများအတွက်ပါ။ အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားတော့မသိဘူးဗျ။
ကျွန်တော်တို့ Gtalk သုံးပြီး sign out တဲ့အခါ username မှာ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့နာမည်တွေကိုကျန်ခဲ့မှာဆိုးလို့ လျှောက်ရိုက်ပြီးထွက်တတ်ကြပါတယ်။
Facebook မှ ဖတ်လိုလျှင်
ကျွန်တော့်အစ်ကို ဆရာ များ၏ ပို့စ်များအား
အစ်ကို ဆရာများအား ၏နေရာမှ ဂါရ၀ပြုအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော့် ဘလော့လေးကို လာရောက်လည်ပတ်ကြသော သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
သင်ယူရခြင်းကို နှစ်သက်သော မန်းလေးသား
Sponsored by မန်းလေးသား